Depiote TIM : MITADY HANODINKODINA ILAY TETIBOLA CLD -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote TIM : MITADY HANODINKODINA ILAY TETIBOLA CLD
Tsy mazava intsony mihitsy ny lalaon’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim). Tsy vitan’ny manao fitetezam-paritra amin’izay fampahafantarana ho kandida amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny filoha nasionaliny, Marc Ravalomanana, fa manao ny ataony ihany koa ireo depiote avy amin’ity antoko ity.
Raha ny fantatra mantsy dia misy an’ilay vola avy amin’ny fanjakana ho fampandrosoana eny ifotony na ny CLD, izay mitentina 200 tapitrisa Ar. Vola natokana ho an’ny distrika rehetra eto Madagasikara io vola hoenti-mampandroso ny eny ifotony io. Saingy, tsy ny eny anivon’ny distrika no mitantana mivantana io volam-panjakana io fa ny depiote avy amin’ireo faritra niaviany avy satria izy ireo no filoha mpitarika ny CLD.
Ny mifanohitra amin’izay fomba-pitantanana izay anefa no zava-misy ho an’Antananarivo manokana. Toa mampiteraka resabe ho an’ireo distrika enina mandrafitra an’Antananarivo mantsy ny fomba fampiasana ny CLD ankehitriny. Tsy vitsy mantsy no manambara, indrindra fa ireo mahafatantra tsara ny fandehan-draharaha fa toa hanaovan’ny depiote Tim ampihimamba ilay volan’ny CLD. Efa mitentina 1 miliara 200 tapitrisa Ar mantsy ny totalin’ny vola ho an’ireo distrika enina eto an-dRenivohitra ireo. Hatreto anefa, mitaraina izy ireo fa toa tsy tody any amin’izy ireo akory ny programan’asa amin’ny fampiasana io vola io. Izany hoe, raha ny fanadihadiana hatrany, mbola tsy hita taratra akory ny fampandrosoana eny anivon’ireo distrika sy kaominina maro. Mankaiza izany ilay CLD?
Raha ny tsilian-tsofina dia toa anaovan’ireo depiote Tim fanomanana ny fandrotsahana an-dRavalomanana Marc ho kandidàn’ny Tim amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018. “Tsy volan’ny Tim ny volam-panjakana. Tokony hatao mazava tsara ny fitantanana io vola ho an’ny distrika ho fampandrosoana eny ifotony io”, hoy ny nambaran’ny mpanao politika iray.
Ankoatra izay, maro amin’ireo distrika no mangataka ny hisiana sy hananganana ny rafitra mpanara-maso ny CLD satria tsy mazava amin’izy ireo intsony ny fitantanana ilay vola mitentina 200 tapitrisa Ar ho fampandrosoana eny amin’izy ireo tsirairay.
Ny lafin’ny fambolena indray no niompanan’ny fotoam-bita, izay niresahan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ ny vahoaka isaka ny Zoma. Nambaran’ny Filoha teny ampiandohana fa “hiompanan’ny ezaka ataon’ny fanjakana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ankoatra ny famatsiana ...Tohiny